Ahoana no hijerena Disney + amin'ny fahitalavitra 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Disney + dia nanomboka tamin'ny fahombiazan'ny besinimaro tao Italia ihany koa, satria manambatra ny sariitatra tsara indrindra ho an'ny ankizy (manomboka amin'ny kilalao mahafinaritra ka hatramin'ny famokarana Pixar vaovao) miaraka amin'ny andiana fahitalavitra manokana miorina amin'ny tontolon'ny Star Wars, nefa tsy manadino daholo Sarimihetsika mahagaga. Na eo aza ny fifaninanana mahery vaika avy amin'ny Netflix sy Amazon Prime Video, maro ny mpampiasa no miaro ny Disney + ho toy ny famandrihana mivantana amin'ny fangatahana ho an'ny fianakaviana iray manontolo, nomena ihany koa ny vidin'ny fifaninanana (€ 6,99 isam-bolana amin'izao fotoana izao na fisoratana anarana isan-taona ho an'ny 69,99, € XNUMX).
Raha mandraka ankehitriny izahay dia tsy nijery afa-tsy atiny Disney + amin'ny PC fotsiny na farafaharatsiny avy amin'ny takelaka, manana vaovao tsara ho anao izahay: afaka izahay amboary Disney + amin'ny fahitalavitra rehetraNa Smart TV na fahitalavitra efijery tsotra (raha mbola misy port HDMI). Noho izany, ndao hojerentsika ny fomba hijerena Disney + amin'ny fahitalavitra, hampifaly ny ankizy sy ny ray aman-dreny liana amin'ny atiny matotra kokoa amin'ity sehatra ity.
VAKIO IHANY: Disney Plus sa Netflix? Inona no tsara sy tsy fitoviana
Hijery Disney + amin'ny fahitalavitra
Ny fampiharana Disney + dia misy amin'ny fitaovana fialamboly efitra fandraisam-bahiny marobe, toy ny fahitalavitra Smart sy fitaovana misy fifandraisana HDMI, mety hisy araraoty ihany koa ny atiny famaritana avo 4K UHD sy HDR (raha mamela azy ny fepetra amin'ny tambajotra sy ny fitaovana ampiasaina). Raha mbola tsy manana kaonty Disney + isika dia tsara kokoa ny haka iray alohan'ny hamakiana ireo sosokevitra ao amin'ireo toko amin'ity torolàlana ity; Raha hisoratra anarana kaonty vaovao dia mankanesa fotsiny amin'ny tranokala fisoratana anarana ofisialy, manorata adiresy mailaka manan-kery ary araho ny torolàlana omena eo amin'ny efijery.
Disney + amin'ny fahitalavitra Smart
Raha manana isika Fahitalavitra Smart farany (LG, Samsung na Android TV) afaka mankafy ny atiny Disney + isika amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny magazay fampiharana ary mitady ilay fampiharana Disney +.
Aorian'ny fametrahana ny rindrambaiko, kitiho ny bokotra amin'ny fanaraha-maso lavitra hanokafana ny faritra Smart, tsindrio ny fampiharana Disney + ary midira miaraka amin'ireo mari-pahaizana efa azontsika. Avy amin'ny Smart TV isika dia afaka mandray soa amin'ny atiny rehetra amin'ny kalitao avo indrindra, manararaotra (raha mifanaraka amin'ny fahitalavitra) ary koa ny famaritana avo indrindra 4K UHD sy HDR; Mba hahazoana kalitao avo indrindra dia takiana fifandraisana Internet haingana dia haingana (farafaharatsiny 25 Mbps amin'ny fisintomana), raha tsy izany dia hilalaovana amin'ny kalitao mahazatra (1080p na ambany kokoa aza) ny atiny. Raha mila fanazavana fanampiny, dia ampirisihinay hamaky ny mpitari-dalana anay. Ahoana ny fomba fampifandraisana Smart TV amin'ny Internet.
Disney + amin'ny lalao lalao
Raha mampifandray konsole lalao vao haingana izahay (PS4, Xbox One, PS5 na Xbox Series X / S), azontsika atao ny mampiasa azy hijerena ny atiny Disney + mandritra ny fiatoana eo anelanelan'ny fivoriana lalao iray sy iray hafa, izay mandray soa amin'ny kalitao izay ho azontsika amin'ny fahitalavitra Smart.
Miaraka amin'ny console efa mifandray amin'ny fahitalavitra amin'ny alàlan'ny HDMI, azontsika atao ny mijery ny atiny Disney + amin'ny alàlanay mankany amin'ny tabilao console (amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra PS na ny bokotra XBox), manokatra ny faritra fampiharana O fampiharana ary ny fanokafana ny fangatahana Disney +, efa misy amin'ny alàlan'ny default amin'ny konsol rehetra voalaza. Raha tsy mahita ny fampiharana napetraka isika, ny sisa ataontsika dia ny manokatra ny play store na ny bokotra fikarohana ary mikaroka ilay app. Disney + anisan'ireo misy. Na dia amin'ny console aza dia azo atao ny manararaotra ny 4K UHD sy HDR (raha toa ka mifanaraka koa ny TV), fa raha tsy manana ny kinova mahery indrindra amin'ireo konsoly amidy isika (PS4 Pro, Xbox One X, PS5 ary Xbox Series X / S) .
Disney + ny Fire TV Stick-nao
Raha tsy manana fahitalavitra Smart isika na tsy eo ny fampiharana natokana dia afaka manamboatra azy io haingana isika amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ilay dongle Fire TV Stick, azo alaina amin'ny Amazon latsaky ny 30 €.
Rehefa avy nampifandray ny Fire TV tamin'ny fahitalavitra (manaraka ny torolàlana hita ao amin'ny anay mpitari-dalana voatokana), safidio ny loharano marina amin'ny fahitalavitra, sokafy ny fizarana fampiharana, mitady an'i Disney + amin'ireo izay misy amin'ny alàlan'ny default ianao ary miditra. Ny fitaovana Fire TV Stick mahazatra sy Lite dia manohana atiny kalitao mahazatra (1080p na ambany); raha mila atiny Disney + ao amin'ny 4K UHD izahay tsy maintsy hifantoka amin'ny Fire TV Stick 4K Ultra HD, misy amin'ny Amazon amin'ny vidiny avo kokoa (60 €).
Disney + ny Chromecast anao
Fitaovana fandefasana malaza iray hafa izay malaza ankehitriny izay ao an-trano rehetra Google Chromecast, azo jerena mivantana ao amin'ny tranokala Google.
Rehefa avy nampifandray ny dongle HDMI tamin'ny fahitalavitra sy Wi-Fi an-trano izahay dia manokatra ny fampiharana Disney + amin'ny finday avo lenta na ny takelaka (ampahatsiahivinay anao fa misy ny fampiharana ho an'ny Android sy ho an'ny iPhone / iPad), miditra miaraka amin'ireo taratasim-panompoana izahay, misafidy ny atiny haverina averina ary, raha vantany vao misy izany dia tsindrio ny bokotra eo an-tampony Mamoaka, handefasana ilay horonan-tsary amin'ny fahitalavitra amin'ny alàlan'ny Chromecast.
Disney + ny Apple TV
Raha anisan'ireo tsara vintana isika tompon'ny fahitalavitra Apple ao amin'ny efitrano, azontsika ampiasaina izy io mijery Disney + amin'ny kalitao avo indrindra.
Raha hampiasa Disney + amin'ny fitaovana fandraisam-bahiny misy marika Apple dia ampodio io, mandehana any amin'ny tontonana rafitra, tsindrio ny fampiharana Disney + ary ampidiro ny fahazoana miditra; raha tsy eo ny fampiharana dia manokatra ny App Store voatokana izahay, mikaroka Disney + ary apetaho amin'ny fitaovana. Satria manohana ny Apple TV amidy 4K UHD e l'HDR Miaraka aminy, azo atao ny mijery ny atiny Disney + misy kalitao avo indrindra, raha toa ka mifanaraka amin'ireo teknolojia ireo ny fahitalavitra ary raha manana tsipika Internet haingana isika (araka ny efa voalaza dia ilaina ny fisintomana 25 Mbps).
Ny fitondrana Disney + amin'ny fahitalaviantsika dia tsy maintsy atao raha toa ka nampavitrika ity serivisy mivantana ity isika, satria ny kalitao avo indrindra dia tsy misy raha tsy amin'ny alàlan'ny fandefasana ny rindranasa amin'ny Smart TV na amin'ny fampiasana ny iray amin'ireo fomba hafa aseho amin'ity toro-lalana ity. Ho an'ireo mpampiasa rehetra izay manana fahitalavitra fisaka tsotra tsy misy fàfana maka fotsiny Fire TV Stick na Chromecast hahazoana ny atiny Disney + haingana sy mora.
Raha mpankafy lehibe ny atiny famaritana avo lenta izahay, dia ho faly amin'ny famakiana hatrany ny lahatsoratray Ahoana ny fampiasana 4K amin'ny Smart TV mi Fomba rehetra mijery ny Netflix amin'ny 4K UHD. Raha etsy andaniny isika dia mitady tolotra hafa hijerena ny tantara an-tsary streaming amin'ny fahitalavitra, vakio fotsiny hatrany ny torolalana ho antsika. Mijere sary mihetsika amin'ny Internet, tranonkala ary fampiharana maimaim-poana.